Ciidanka NISA oo soo afjaray howlgalkii Xalane – Radio Muqdisho
Ciidanka NISA oo soo afjaray howlgalkii Xalane
Ciidanka Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa goor dhow soo afjaray howlgalkii lagu nadiifinaayay maleeshiyaadkii weeraka ku soo qaaday Xerada Xalane ee saldhiga ugu weyn ee Amisom.
Ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan Hay’adda Nabad sugid iyi Sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan kuwo loo yaqaano Gaashaan ayaa gudaha u galay goob ay ku go’doonsanaayeen maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday Saldhigga Xalane.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidanka Gaashaan ee Nabad Sugiida iyo Sirdoonka Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen labo ka tirsan kooxda Al-shabaab oo isku dayay in ay qal qalgeliyaan saldhigaasi, waxaana weerarkaasi ay soo qaadeen Al-Shabaab ku geeriyooday 5 ka tisan Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM iyo mid kamid ah Shaqaalaha rayidka ah oo xerada la weeraray ka howlgali jiray.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in saraakiisha Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ay war-fidiyeenka u soo bandhigan maxaabiista laga qabtay Al-shabaab iyo sida ay u soo geba gebeeyeen howlgalkaasi.
R/wasaare Sharma’arke oo ka hadlay qorshahiisa siyaasadeed uu dalka ku hogamindoono (Dhageyso+Sawirro)
R.W Sharma'arke: "Si adag ayaan u cambaareynayaa weerarka dareen la’aanta ah ee lala beegsaday Xerada AMISOM"